INokia 5.1 kunye neNokia 2.1 zifika ngokusemthethweni eSpain | I-Androidsis
INokia 5.1 kunye neNokia 2.1 ziqaliswe ngokusesikweni eSpain
INokia iba yenye yezona zinto zithandwayo eYurophu. Ifemi sele ingene kwiimveliso ezintlanu ezona zithengisa kakhulu kwilizwekazi, kwaye bayaqhubeka nokwazisa iifowuni zabo, kule meko eSpain. Ukusukela ukuba iimodeli ezimbini zenkampani zifika ngokusemthethweni eSpain. Imalunga neNokia 5.1 kunye neNokia 2.1
Sifumana iifowuni ezimbini eziphakathi, eziza kuqinisa umenzi osele egqibile phakathi kuluhlu. Zombini ezi Nokia 5.1 kunye neNokia 2.1 zineenkcukacha ezifanelekileyo kwaye bema ibhetri enkulu, eya kuthi inike inkululeko enkulu.
INokia 2.1 yexabiso eliphantsi kwaye ilula kwiimodeli ezimbini ezaziswa eSpain. Yaziswa ngokusemthethweni kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, njengaphakathi phakathi kuluhlu olune-18: 9 kwesikrini. Ke ujoyina enye yeendlela zentengiso ngalo mboniso. Ikwaveze ibhetri yayo ye-4.000 mAh, eya kuthi inike abasebenzisi ukuzimela okukhulu.
Le Nokia 2.1 isungulwe eSpain ngemibala eyahlukeneyo. Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha phakathi kwemibala emibini yokudibanisa: iblue / isilivere okanye ngwevu / isilivere. Ngabo onokubona kumfanekiso ongentla, ke akukho mmangaliso kulo mbandela. Ifika kwilizwe lethu ngexabiso le-euro ezingama-119.
Kwelinye icala sifumana iNokia 5.1, eyimodeli ethe kratya ngakumbi kwaye iphezulu. Ukunikezelwa kumsitho ofanayo ngaphezu komzekelo wangaphambili, kwaye wabelane ngale 18: 9 kwesikrini kunye nolwakhiwo olufanayo. Inempawu ezifana ne-NFC.
Le Nokia 5.1 isungulwe eSpain ngexabiso lama-euro angama-199. Ke inexabiso elifikelelekayo kakhulu kwifowuni ekumgangatho ophakathi. Kule meko iphehlelelwe ngemibala emibini eyahlukileyo, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nethoni yobhedu. Ukusukela namhlanje ungazithenga ezi fowuni zimbini ngokusesikweni, kokubini kwiivenkile ezibonakalayo nakwi-Intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 5.1 kunye neNokia 2.1 ziqaliswe ngokusesikweni eSpain
Basket zonke iintlobo zezinto kwi-GarbageDay, okanye uSuku lweNkunkuma